BRICS မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကြား အားကောင်းစွာ ရပ်တည်လျက်ရှိ - Xinhua News Agency
BRICS မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကြား အားကောင်းစွာ ရပ်တည်လျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ BRICS ဘဏ်အဖြစ် လူသိများသော New Development Bank (NDB) ရုံးချုပ်အဆောက်အအုံကို ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘရာဇီး၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် တောင်အာဖရိက စသည့်နိုင်ငံများပါဝင်သော ထွန်းသစ်စဈေးကွက်နိုင်ငံများ အုပ်စုဖြစ်သည့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင် “အရည်အသွေး မြင့်မားသော BRICS မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်လျက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ခေတ်သစ်ကို ဖွင့်လှစ်စို့” ဟူသော ခေါင်းစဉ်အရ အွန်လိုင်းပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။စတင်တည်ထောင်ပြီးချိန်မှစ၍ ၁၆ နှစ်တာကာလအတွင်း BRICS သည် ပွင့်လင်းမှု၊ အားလုံးပါဝင်မှုနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးအမြတ်ရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စိတ်ဓာတ်အား စောင့်ထိန်းလျက် နယ်ပယ်များစွာ၌ လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ အားလုံးပါဝင်ပြီး မြောက်များစွာသော အဆင့်များပါဝင်သည့် မူဘောင်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဘရာဇီးလီးယားမြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုခံယူနေသော သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးအား ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာကြီးသည် ရာစုနှစ်အတွင်း မကြုံတွေ့ဖူးသော ကပ်ရောဂါ အပါအဝင် မသေချာမှုများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် အဓိကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းတို့၏ ဉာဏ်ပညာနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို အထောက်အကူပြုမည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။
BRICS နိုင်ငံများသည် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှု တိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါသော မောင်းနှင်အားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရှည်ကြာလှသော ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ရောဂါသက်ရောက်မှု ရှိနေသော်ငြားလည်း BRICS နိုင်ငံများ၏ ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈.၅၅ ဘီလီယံနီးပါး ရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကထက် ၃၃.၄ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း တရားဝင်အချက်အလက်အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် ရှမန်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော BRICS New Industrial Revolution ရှိ ပြခန်းတစ်ခုတွင် အသိဉာဏ်ထည့်သွင်းထားသော စက်ရုပ်ခွေးတစ်ကောင်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြား BRICS နိုင်ငံများအကြား နှစ်ဘက်ကုန်သွယ်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၉၀.၄၂ ဘီလီယံရှိခဲ့ရာ ယမန်နှစ်ကထက် ၃၉.၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုမှာ အလားတူကာလ၌ အလုံးစုံတိုးတက်မှု ပို၍မြင့်မားလားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
BRICS နိုင်ငံများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း စာရင်းအင်းများအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် အခြေစိုက် တာယာထုတ်လုပ်သူ Prinx Chengshan (Shandong) တာယာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ဘရာဇီးဈေးကွက်၌ ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ဒေသတွင်း ဖြန့်ချိသူများနှင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများအကြား ထင်ရှားလာခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံကြား စီးပွားလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရေး (AEO) အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုသဘောတူစာချုပ်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က တရားဝင်အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုများကို မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့အကြောင်းအရာများသည် BRICS နိုင်ငံများ၌ အတော်အသင့် ဘုံတူညီလာလျက်ရှိလာပြီး ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လွှမ်းခြုံခြင်းကို တိုးချဲ့သွားမည်သာဖြစ်သည်။ ယခုလဆန်းပိုင်း၌ ကျင်းပခဲ့သော ၁၂ ကြိမ်မြောက် BRICS စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအတွင်း တက်ရောက်လာသူများက ဒစ်ဂျစ်စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထောက်ပံ့ကွင်းဆက်နှင့် နိုင်ငံစုံကုန်သွယ်ရေးယန္တရား စသည့်နယ်ပယ်များ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
ထွန်းသစ်စဈေးကွက်က ရင်ဆိုင်နေရသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရန် ရှန်ဟိုင်မြို့တွင် ရုံးချုပ်ထားရှိသော New Development Bank (NDB) အား BRICS နိုင်ငံများက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စီမံကိန်းများမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ရထားလမ်းကွန်ရက် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအစီအစဉ်များနှင့် ရုရှားနိုင်ငံရှိ အသုံးပြုခကောက်ခံသောလမ်းအသစ်များအထိ NDB က ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလအတွင်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ စီမံကိန်း ၈၀ ကျော်အား ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကာ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၃၀ ခန့် ရှိခဲ့သည်။
ဘဏ်၏အဆိုအရ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက် ငွေကြေးကူညီပံ့ပိုးမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၃၀ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှု လျှော့ချရေးအတွက် အသုံးပြုမည့်ရန်ပုံငွေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သစ်လွင်၍ အားကောင်းသော တွန်းအားအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် BRICS မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် New Industrial Revolution (PartNIR) Innovation Center ကို နည်းပညာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ကူးပြောင်းရေး အသုံးပြုရန် BRICS နိုင်ငံများအတွက် ခြေကုပ်အဖြစ် ပံ့ပိုးကူညီရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် ရှမန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဇွန်လဆန်းပိုင်းတွင် အဆိုပါစင်တာက NDB နှင့်အတူ နှစ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးနှင့် BRICS နိုင်ငံများ ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) အား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း၊ နှစ်ဘက်တို့သည် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အစီအစဉ်များဆိုင်ရာ ပူးတွဲသုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့် အချက်အလက်ဖလှယ်ရေးမှတစ်ဆင့် ဉာဏ်ရည်တု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အင်တာနက်၊ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး စသည့်နယ်ပယ်များတွင် ဦးစားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် NDB အပြင် BRICS PartNIR Innovation Center သည် BRICS နိုင်ငံများကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် နောက်ထပ် ကောင်းမွန်သော ယန္တရားလည်း ဖြစ်ကြောင်း NDB ဥက္ကဋ္ဌ Marcos Troyjo က ပြောခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် BRICS အပြင် ထွန်းသစ်စဈေးကွက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကုလသမဂ္ဂ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ ကုလသမဂ္ဂ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ ဖော်ဆောင်ခြင်း အပါအဝင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါစတင်ချိန်မှစ၍ BRICS နိုင်ငံများသည် ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးမှုများဖြင့် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းများနှင့် ရောဂါကုသမှုအစီအစဉ်များ၊ ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ဆေးဝါး သုတေသနနှင့် ဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မတ်လတွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ Butantan အင်စတီကျု့က တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားသော CoronaVac ကာကွယ်ဆေးအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်စ၍ ထုတ်လုပ်ရန် ဆောပိုလိုမြို့တွင် စက်ရုံတစ်ရုံ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မတ်လတွင်ပင် BRICS ကာကွယ်ဆေး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစင်တာ ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားကို အွန်လိုင်းဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ BRICS အဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်များအဖြစ် သာတူညီမျှဖြန့်ဝေခြင်းမှတစ်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကာကွယ်ဆေးများ သင့်တင့်မျှတစွာ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာရန် ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ချက်အား ပူးတွဲအဆိုပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ချက်သည် BRICS နိုင်ငံများ၏ ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖြစ်ရပ်များအား တုံ့ပြန်စွမ်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းလုပ်ငန်း၌ ပွင့်လင်းမှုရှိရန် အထူးအလေးပေးထားသလို ချိတ်ဆက်ရန် မိတ်ဖက်များအား ပိုမိုဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိသည်။
၁၂ ကြိမ်မြောက် BRICS ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးများကို မေလက ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး BRICS နိုင်ငံများအနေဖြင့် ပမာဏကြီးမားသော ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက် ဆောလျင်စွာသတိပေးချက်စနစ်ကို ထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစနစ်သစ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်းမာရေး စသဖြင့် စီစဉ်ထားသောခေါင်းစဉ်များကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
BRICS ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အောင်မြင်ခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထွန်းသစ်စဈေးကွက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ပြောဆိုမှုကို အဆင့်မြှင့်တင်သည်သာမက BRICS အား ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် အရေးပါသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်းပဲ ဖြစ်စေသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံက “BRICS Plus” ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံကို အဆိုပြုခဲ့ပြီး ယင်းမှာ ပိုမိုကြီးမားသော စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက် BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ညီညွတ်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အလားအလာကို ပူးတွဲလိုက်နာရာတွင် BRICS “မိတ်ဆွေများစက်ဝန်း” ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိန်းသိမ်းရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် BRICS နှင့် ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအကြား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပွဲပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် “BRICS Plus” ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံကို ထောက်ခံခဲ့ကြသလို သဘောလည်းတူခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
“BRICS Plus” ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ချီးကျူးပြောကြားလျက် ဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်ပမှတက်ရောက်ကြသူများက BRICS နိုင်ငံများနှင့် ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များကြား မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် တိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ သို့မှသာ ပိုမို၍ မျှတပြီး သာတူညီမျှရှိသလို ပိုမိုပါဝင်ကာ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအင်စတီကျု့၏ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအားလေ့လာခြင်းဌာန ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး Wang Youming က ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုရှိရေး၊ အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းထူထောင်ရေး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ BRICS ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထောက်ပြခဲ့ကြောင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများစွာ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ပြင်းပြသောဆန္ဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် BRICS ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယန္တရားသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စိန်ခေါ်မှုများ၏ သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကို ကူညီရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ National University of Singapore ၏ Lee Kuan Yew School of Public Policy တွဲဖက်ပါမောက္ခ Gu Qingyang က အနာဂတ်တွင် BRICS နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ယန္တရားကို ထပ်မံအားကောင်းစေနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးချဲ့သွားနိုင်ကြောင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပိုမိုကြီးမားသောနေရာရရှိရန် ကုလသမဂ္ဂ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များနှင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက်အောက်ရှိ အစီအစဉ်များနှင့်အတူ နက်ရှိုင်းစွာ ပေါင်းစည်းသွားနိုင်ကြောင်း ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ Cyril Ramaphosa က ကိပ်တောင်းမြို့တွင် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ၎င်း၏နိုင်ငံအနေဖြင့် အခြားနိုင်ငံများစွာက ယုံကြည်မှုရှိသော “ဆွဲဆောင်မှုရှိသော” အုပ်စုဖြစ်သည့် BRICS ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ “ကြီးမား၍ နက်ရှိင်းသော မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး” ကို မြင်တွေ့လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#China, #BRICS, #Partnership, #GlobalChallenges, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #တရုတ်, #မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး, #ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ, #ဆင်ဟွာ, #မြန်မာ, #ဆင်ဟွာမြန်မာ
Xinhua Headlines: BRICS partnership stands strong amid global challenges
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-06-21 01:27:18
BEIJING, June 20 (Xinhua) — The 14th summit of BRICS, an emerging-market group that includes Brazil, Russia, India, China and South Africa, will be held this week in virtual format under the theme of “Foster High-quality BRICS Partnership, Usher inaNew Era for Global Development” under China’s chairmanship.
BRICS countries are an important driving force for regional and global economic and trade growth. Despite the prolonged impact of COVID-19, the total volume of trade in goods of BRICS countries reached nearly 8.55 trillion U.S. dollars in 2021,ayear-on-year increase of 33.4 percent, official data shows.
Meanwhile, China’s bilateral trade with other BRICS countries totaled 490.42 billion U.S. dollars, up 39.2 percent year on year and higher than the overall growth of China’s foreign trade in the same period.
Worldwide, BRICS countries account for 18 percent of trade in goods and 25 percent of foreign investment, statistics show.
From renewable energy projects in Brazil to railway network upgrade programs in India and new toll roads in Russia, the NDB had approved more than 80 projects in member countries by May 2021, withatotal portfolio of some 30 billion U.S. dollars.
According to the bank, from 2022 to 2026, it will provide 30 billion U.S. dollars of financial support for member countries, with 40 percent of the funds to be used for mitigating global warming.
Earlier in June, the center signedamemorandum of understanding (MoU) with the NDB to facilitate bilateral cooperation and promote the common development of BRICS countries, stating that the two sides will give priority to cooperation in such fields as artificial intelligence, the industrial Internet, energy conservation and environmental protection through joint research, personnel training and information sharing on infrastructure and sustainable programs.
Duringarecent media briefing in Cape Town, South African President Cyril Ramaphosa said that his country wants to seea“greater and deeper partnership” with other members of BRICS, an “attractive” group that many other countries have confidence in.
(Reporting by Yang Dingmiao, Wei Mengjia, Zhang Xinyi, Fu Min, He Leijing, Wang Xuetao, Xiao Yichen; Video reporters: Fu Min, Chen Wang, Hong Liang, Xie Zhao, Wang Zhao, Tian Hongyi, Jiang Lei, Li Shuting, Yang Zhigang, Yin Jiajie ; Video editors: Zhu Cong, Luo Hui) ■
Photo 1 : Aerial photo taken on June 17, 2022 shows the headquarters building of the New Development Bank (NDB), also known as the BRICS bank, in east China’s Shanghai. (Xinhua/Fang Zhe)
Photo2: An elderly person receivesadose of China’s COVID-19 vaccine in Brasilia, Brazil, Jan. 22, 2021. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)
Photo3: Photo taken on Sept. 8, 2021 shows an intelligent robot dog during an exhibition on BRICS New Industrial Revolution held in Xiamen, east China’s Fujian Province. (Xinhua/Lin Shanchuan)